Arts na Ntụrụndụ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Arts na Entertainment
Esi esi enweta udiri nnunu? Ọtụtụ ụzọ maka ndị na-eme ihe nkiri novice
Ihe na 15.09.2019 18.09.2019
Osisi cherry nnụnụ buru oke ibu. Mgbe ụfọdụ ọ ga-eru ịdị elu nke mita 12. Otutu umu nnụnụ na-etolite n’akụkụ ọdọ mmiri na osimiri. Enwere ike ịchọta ya na oke ohia. Ifuru ...
Ugwu Mazurka: mbido ya na nkọwa ya
Ihe na 15.09.2019 27.09.2019
Egwuru egwu Mazurka pụtara na Poland. N'ebe ahụ, a na-akpọ ya obere dị iche iche. A na-akpọ ya "Mazur." Gba egwu a dị ezigbo ngwa ma gbasie ike. Ala nna ya bụ Mazovia, ebe ndị na-akpọ onwe ha Masuria bi…
Aldanov, Agbada Ekwensu. Nchikota na njiri mara nke akwukwo
Ihe na 15.09.2019 10.10.2019
Site n'oge nke Alaeze Ukwu, Russia bụ onye a ma ama maka ndị dere ya na ndị na-ede uri. Ọrụ ndị a na - enyeghị bụ ndị merela ochie ọ bụghị naanị na obodo anyị, mana n'ụwa niile, nwere ike iji ụzọ omenala anyị dị nganga ...
Ihe na 15.09.2019 13.11.2019
Ihe eji egwu egwu a bu ihe eji mara ndi ihe omumu ohuru na-enweta oganihu kasi elu, ma uzo ndi n’aga gara aga na-abanye n’okpuru. Ndi otu egwu egwu nke 80 nke ndi umuaka egwu doro anya site na ochicho ha igosiputa nke oma…
Onye na-eme ihe nkiri Lyudmila Ivanova: akụkọ ndụ, ndụ onwe onye
Lyudmila Ivanova bụ onye na-eme ihe nkiri nke akụkọ ndụ ya kwesịrị nsọpụrụ, ọrụ ya bidoro sie ike, mana o meriri ihe niile ma rụpụta ihe ọ na-agba kemgbe. Amụrụ na Moscow ...
Onye na-eme ihe nkiri Yevgeny Kindinov: biography, ndụ onwe onye, ​​foto
Evgeny Kindinov, foto ya ugbu a n'ihu gị, n'oge Soviet mere ka ọtụtụ ụmụ nwanyị na-ata ahụhụ n'ihi ịhụnanya na-enweghị atụ maka ya. Onye na-eme ihe nkiri n'oge ntorobịa ya mara mma nke ukwuu, mana ọ hụrụ naanị ...
Eserese sere. Usoro nke eserese Flemish. Lemlọ Akwụkwọ Flemish nke sere
Omenala oge gboo, n'adịghị ka mmegharị nke avant-garde nke oge a, enwetala obi ndị na-ekiri mgbe niile. Otu ihe ngosi pụtara mma ma baa ọgaranya na-adịgide na onye ọ bụla zutere ọrụ nke ndị omenkà Dutch mbụ. Flemish ...
Onu ogugu ole ka Tchaikovsky dere? Ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ, kama asaa. Ha nile - ha di nma
Ihe na 15.09.2019 08.10.2019
Pyotr Ilyich Tchaikovsky bụ onye Russia dere na narị afọ nke 19. Ejiri egwu ya mara mma, ihunanya na ịba ọgaranya dị egwu. Ekelere P.I. Tchaikovsky, egwu egwu Russia erutegogobeghị oke. N'otu oge ahụ ...
Ndị na-eme ihe nkiri nke "Fast and the Furious 7", ma ọ bụ Kedu otu esi gboo ihe nkiri na-enweghị Paul Walker
Ndị na-eme ihe nkiri a "The Fast and the Furious 7" na ndị ọrụ ngo ahụ na Nọvemba 2013 tụrụ ndị ngagharị iwe na onyeisiala akpọrọ Paul Walker nwụrụ na-agwụzughi ọrụ ya…
Otu Mirage: akụkọ ihe mere eme, nyocha, foto. Ngwakọta egwu ochie
Ihe na 15.09.2019 25.11.2019
N'isiokwu nke taa, anyị ga-amata ndị otu a ma ama nọ na mbụ, nke e mepụtara n'oge USSR na nke ama ama nke ukwuu na oke mbara ala anyị buru ibu n'oge oge Perestroika. Nke a bụ otu Mirage. Akụkọ ndụ, ...
Ihe nkiri "Nwa nke Nna nke Mba": ndị na-eme ihe nkiri na nkata
Na 2013, mgbe otu afọ na ọkara nke nnwale, ịse ma dezie ya, enyo enyopụtala ọrụ jikọrọ ndị isi nke Russia, Belarus na Ukraine - ihe nkiri "Ọkpara nke Nna nke Ndị Otu." Usoro isiokwu a bụ mbọ ọzọ ịchọrọ ...
Moscow, Ụlọ ihe nkiri dịgasị iche iche: akwụkwọ mpịakọta, tiketi, foto na nyocha
Ọnọdụ a ka ama ama ama na Moscow. Theaterlọ ihe nkiri a na-eme n'ọgbọ dị iche iche kemgbe ọtụtụ afọ emeela ka ndị bi na ndị ọbịa nke isi obodo nwee ọtụtụ nzukọ na-atọ ụtọ. Trolọ ihe nkiri na egwuregwu dị iche iche na-eme ihe nkiri ...
Lyudmila Zorina: ndu ​​na ndu nke onye omere (foto)
Ihe na 15.09.2019 12.12.2019
Akụkọ ndụ nke Lyudmila Zorina malitere na prewar afọ. A mụrụ ya ọnwa abụọ tupu mmalite nke Agha IIwa nke Abụọ, na 1 na May 1941 n'obodo ahụ nwere aha mara mma Saratov. Site na nwata, nwata nwanyi…
Kedu agba na agba aja jikọtara na: atụmatụ, echiche na aro
Ihe na 15.09.2019 26.11.2019
A na-ewere ọla edo dịka otu n'ime ọla bara uru dị na mbara ụwa anyị. Ọ na -eme nsị ala nke obere, ihe nracha ya na-afọ nke nta. Ya mere, ụdị okomoko a nwere ike iru anyị ...
Olee ọrụ Marshak S. dere n'oge ndụ ya?
Ihe na 15.09.2019 27.11.2019
Aha mara Marshak Samuel Yakovlevich ama ama n’ụwa niile. Ihe karịrị otu ọgbọ etolitewo n'ọrụ dị ukwuu nke ode akwụkwọ. N'ụzọ bụ isi, onye ọ bụla maara Marshak dị ka onye edemede ụmụaka, mana Samuel Yakovlevich ka nọ…
Fazu Aliyeva: akụkọ banyere akụkọ ikpeazụ nke ndị na-abụ abụ kacha mkpa na narị afọ nke iri abụọ
Ihe na 15.09.2019 02.12.2019
N'ụbọchị mbụ nke afọ 2016 ọhụrụ, nnukwu Avar na uri Soviet na onye edemede nwere aha pụrụ iche na aha pụrụ iche maka ndị Slav, Fazu Aliyev, abụghị. Akụkọ ndụ nwanyị a ama ama na-enyere ...
Gịnị bụ akụkọ? Ihe putara na okwu a bu akuko.
Ugboro ole ka anyị na-anụ ugbu a na okwu na okwu dị ka 'ọmụmụ nke akụkọ mgbe ochie' na-enweghị echiche banyere ihe akụkọ bụ, n'ezie. Ọ bụrụ na anyị tụgharịa gaa na isi mmalite, mgbe ahụ okwu ahụ legenda sitere na asụsụ Latin. Yabụ ...
Akụkọ akụkọ omimi "Queen of Spades". Ọdịnaya nke akụkọ ahụ, ihe ndị bụ isi
Obi uto na anyaukwu, udiri aghugho ihe ga-adakwasị ya, n'otu dara ada wee rịgoro n'ugwu ndị a na-agaghị anagide - ndị a bụ ebumnuche nke isi ihe akụkọ ahụ - injinia German. E mesịa, Dostoevsky ga-egosi oke agụụ a nke na-enwu ntụ dika ntụ nwoke, ọkachasị…
Brothersmụnne nwoke ahụ siri ike "Baby": nchịkọta na nsogbu ọrụ ahụ
Ihe na 15.09.2019 14.10.2019
“Nwa” bụ akụkọ akụkọ Arkady na Boris Strugatsky na akụkọ ọdịbendị akụkọ sayensị, otu n'ime ọrụ akụkọ ndị Soviet dere. E bipụtara ya n'afọ 1971 n'akwụkwọ akụkọ Aurora. Kedu echiche a tọrọ ...
Ihe omimi nke Pechorin
“Onye dike nke oge anyị” bụ akwụkwọ akụkọ gbasara akparamaagwa mbụ na mba anyị ebe Lermontov na-ekpughere ndị ụwa na - agụ ya ihe na echiche onye na - eme echiche. Mana n'agbanyeghị nke a,…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,529.